လက္တေလာ အခြေအနေဆိုးရွားနေတဲ့ ကယားပြည်နယ်အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ့် နေခြည်ရွှန်းလဲ့ – Daily News
လက္တေလာ အခြေအနေဆိုးရွားနေတဲ့ ကယားပြည်နယ်အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ့် နေခြည်ရွှန်းလဲ့
ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရာမှတစ်ဆင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့သရုပ်ဆောင် နေခြည်ရွှန်းလဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေများတွင် ပြည်သူတွေဘက်ကနေအခိုင်အမာရပ်တည်ပေးနေသော အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လတ်တလောဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကနေ Speak Out လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း နေခြည်ရွှန်းလဲ့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် လက်နက်များဖြင့်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ ကယားပြည်နယ် အတွက် တတ်နိုင်သလောက် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ့်အကြောင်း ရေးသားပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ဘဝမှာ အိမ်ကလူတွေမပါဘဲ ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လွိုင်ကော်မြို့သို့ပထမဆုံး ခရီးထွက်ဖြစ်ဖူးတဲ့ အကြောင်း ပြောပြထားတာပါ။ ခရီးသွားခဲ့စဉ်က အမှတ်တရဖြစ်စဉ်များကိုရေးသားဝေမျှရင်း လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ကယားပြည်နယ်ကအကြောင်းတွေကြားသိရတဲ့ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါ။
သူမကလည်း ” ဘဝမှာ အိမ်ကမပါဘဲ ကျောင်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ထွက်ဖူးတဲ့ပထမဆုံးခရီးက လွိုင်ကော်မြို့လေးကိုပဲသူငယ်ချင်းရဲ့လွိုင်ကော်ကအမျိုးအိမ်ဆီအလည်သွားတော့ ကလေးလေးပုစိလေးတွေကကိုယ့်နာမည်လေးခေါ်တော့ချစ်လွန်းလို့ အိမ်က အဘိုးအဘွားတွေကလည်းသဘောကောင်းလို့ပျော်နေခဲ့ရတာအာ့အချိန်တုန်းကပေါ့။ ကယားပြည်နယ်၊လွိုင်ကော်မြို့မှာ ယနေ့ညကတည်းက အခြေအနေဆိုးရွားစွာ၊ လက်နက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ကြားပါတယ်။ ကျွန်မတို့တစ်နိုင်ငံလုံး ကယားပြည်နယ်ရဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခအပေါ် Attention အပြည့်ရှိပါတယ်။ကယားပြည်နယ်နဲ့အတူရှိပါမယ်။ Support နိုင်သမျှအကုန် Support ဖို့အဆင့်သင့်ပါပဲ !!! #SaveMyanmar # savekayah #SaveLoikaw ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ပြည်သူများမှလည်း ကယားပြည်နယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆေးဝါး၊စားသောက်ကုန်တို့ကို လှူဒါန်းကြဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီး အရေးတော်ပုံကြီးလည်း အမြန်ဆုံးအောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။
လက်တလော အခွအေနဆေိုးရှားနတေဲ့ ကယားပွညျနယျအတှကျ တတျနိုငျသလောကျ ထောကျပံ့ကူညီပေးသှားမယျ့ နခွေညျရှနျးလဲ့
ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမြားတှငျ ပါဝငျသရုပျဆောငျရာမှတဈဆငျ့ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိထားသူကတော့သရုပျဆောငျ နခွေညျရှနျးလဲ့ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ အခွအေနမြေားတှငျ ပွညျသူတှဘေကျကနအေခိုငျအမာရပျတညျပေးနသေော အနုပညာရှငျတဈဦး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လတျတလောဖွဈရပျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး အရေးကွီးတဲ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားကိုလညျးသူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျကနေ Speak Out လုပျပေးနတော ဖွဈပါတယျ။မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး နခွေညျရှနျးလဲ့ရဲ့ Facebook အကောငျ့တှငျ လကျနကျမြားဖွငျ့ဖိနှိပျခံနရေတဲ့ ကယားပွညျနယျ အတှကျ တတျနိုငျသလောကျ ထောကျပံ့ကူညီပေးသှားမယျ့အကွောငျး ရေးသားပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ဘဝမှာ အိမျကလူတှမေပါဘဲ ကြောငျးက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လှိုငျကျောမွို့သို့ပထမဆုံး ခရီးထှကျဖွဈဖူးတဲ့ အကွောငျး ပွောပွထားတာပါ။ ခရီးသှားခဲ့စဉျက အမှတျတရဖွဈစဉျမြားကိုရေးသားဝမြှေရငျး လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့ ကယားပွညျနယျကအကွောငျးတှကွေားသိရတဲ့ အတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈနတောပါ။
သူမကလညျး ဘဝမှာ အိမ်ကမပါဘဲ ကြောငျးကသူငယျခငျြးတှနေဲ့ထှကျဖူးတဲ့ပထမဆုံးခရီးက လှိုငျကျောမွို့လေးကိုပဲသူငယျခငျြးရဲ့လှိုငျကျောကအမြိုးအိမျဆီအလညျသှားတော့ ကလေးလေးပုစိလေးတှကေကိုယျ့နာမညျလေးချေါတော့ခဈြလှနျးလို့ အိမ်က အဘိုးအဘှားတှကေလညျးသဘောကောငျးလို့ပြျောနခေဲ့ရတာအာ့အခြိနျတုနျးကပေါ့။ ကယားပွညျနယျ၊လှိုငျကျောမွို့မှာ ယနညေ့ကတညျးက အခွအေနဆေိုးရှားစှာ၊ လကျနကျပေါငျးမြားစှာနဲ့ ဖိနှိပျခံနရေတယျကွားပါတယျ။ ကြှနျမတို့တဈနိုငျငံလုံး ကယားပွညျနယျရဲ့ စဈဘေးဒုက်ခအပျေါ Attention အပွညျ့ရှိပါတယျ။ကယားပွညျနယျနဲ့အတူရှိပါမယျ။ Support နိုငျသမြှအကုနျ Support ဖို့အဆငျ့သငျ့ပါပဲ !!! #SaveMyanmar # savekayah #SaveLoikaw ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။
အနယျနယျအရပျရပျက ပွညျသူမြားမှလညျး ကယားပွညျနယျအတှကျ လိုအပျတဲ့ ဆေးဝါး၊စားသောကျကုနျတို့ကို လှူဒါနျးကွဖို့ ပွငျဆငျနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ပွညျသူတှေ အားလုံးဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးပွီး အရေးတျောပုံကွီးလညျး အမွနျဆုံးအောငျမွငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ။
တစ်ခါမှ မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးဖူးခြင်းမရှိသေးသည့် အသက်၆၃နှစ်အရွယ်မိခင်မုဆိုးမကြီးအတွက် သတိုးသားနေရာမှပါဝင်၍ ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးခဲ့သည့် သမီး
အားကစားလုပ္စရာမလိုဘဲ တောင့်တင်းခိုင်မာလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မျိုးပိုင်ဆိုင်စေမဲ့ ဝတ်စုံ